अमेरिकी विदेशमन्त्री पम्पियो किन आएनन् नेपाल ? - Himali Patrika
हिमाली पत्रिका १३ कार्तिक २०७७, 12:15 pm
यसैसन्दर्भमा डा. भट्टराई थप लेख्छन्, ‘तपाईंको घरमा मुसो र भिखारी पनि आएन भने आफ्नो हैसियत बुझ्नुस् ।’
नेपालमा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत प्रदान गर्ने सहयोग संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदनको लागि निरन्तर रुपमा आग्रह गरिरहेको छ तर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको विवादका कारण यो अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
अर्काेतर्फ लामो समयदेखि अमेरिकाले नेपाललाई ‘भारतीय आँखा’ले हेर्ने गरेको विश्लेषण समेत हुने गर्दछ ।
त्यसैले नेपालको मामिलामा फेरि अमेरिकी विदेशमन्त्रीले दिल्लीमा नै परामर्श गरेर त फर्केनन् भन्ने पनि एकाथरीको विश्लेषण छ ।
सन् २०१८ र २०१९ मा थुप्रै अमेरिकी अधिकारीहरुले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । तर अमेरिकी विदेशमन्त्री नेपाल आएको भए उच्च राजनीतिक तहमा सम्बन्ध स्थापना गर्न सहज हुने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।